कथा-सहानुभूति - Manoj Adhikari
June 9, 2020 September 3, 2020 admin slider, कथा, साहित्य
उमेर : ६२ वर्ष ।
ठेगाना : नम्बर नखुलेको बेसमेन्ट ।
काम : डेलिभरी ट्रक ड्राइभर ।
रबले बिहे नै गरेन । गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठानेन । उमेरमा ऊ असाध्यै ह्यान्डसम । गोरो वर्ण, ६ फिटभन्दा अग्लो कद । निलो आँखा । खैरो कपाल । लामो नाक । ठूल्ठूला हातपाखुरा । ऊ आकर्षणको केन्द्र नहुने कुरै थिएन । जवानी मस्त चढेको बेला । जस्तो जवानी उस्तै जीवन जिउने कलामा ऊ माहिर खेलाडी पनि । त्यसैले मस्त जवानीमा उसका दिनहरु मस्ताना बिते । यस्तो उमेरमा न वर्तमानको सुर्ता न भविष्यको चिन्ता । त्यो बेला नै त्यस्तै थियो रबका लागि । जस्तो समय अनि साथीभाइको सङ्गत । ऊ त्यस्तै जीवन बाँचेर आएको एक भुक्तभोगी ।
आज उमेरका ६ दशक नाघे पनि ऊ कम आकर्षक छैन । जीउडाल फिट एन्ड फाइन राख्न उसले खानपानमा कहिल्यै सम्झौता गरेन । बल सुहाउँदो काममा पनि कहिल्यै पछि हटेन । यस्तै बानीले ऊ कुनै दिन कामविहीन बस्नु परेन ।
‘‘मन लागेको खानु र सकेको काम गर्नु नै मेरो जीवनका स्थायी कुरा हुन् आजसम्म’ ऊ स्वमन्त्र सुनाउँछ, ‘‘अरु त सब अस्थायी । हावाका झोँक्काजस्ता । पानीका फोकाजस्ता । क्षणमै आउने । क्षणमै बिलाएर जाने ।’’
फरक यति हो आज त्यो बेलाको जस्तो शरीरमा बल छैन उसको । ढल्कँदो उमेर देखेर अहिलेका युवती उतिसारो पछि लाग्दैनन् । पहिले भए उसका पछाडि रोजीछाडी मस्तानाहरु हुन्थे । अहिले रबलाई यसमै औधी चिन्ता छ । अझै पनि आँखा अगाडिबाट जाने जो–कोही युवती हुन् वा अधबैंसे उसमा थामिनसक्नु औडाहा जन्मन्छ । उसको हाउभाउ पठ्ठो हुँदाको समयमा फर्के जस्तै हुन थाल्छ ।
‘‘यो मनको तिर्सना मेट्ने बहाना मात्रै हो । गर्न त पहिले जस्तो के सकिन्छ र अहिले ?’’ क्षणमै ऊ आफैंलाई प्रश्न गर्दै शान्तभावमा फर्किन्छ ।
‘५०–५२ वर्ष हुँदासम्म त मोजमस्तीकै दिन थिए । यी सबै उमेरका बेला मात्र रहेछन् ।’ अहिले ऊ ती दिन सम्झेर पूरै नोस्टाल्जिक बन्छ ।
दिनहुँ तरुनी च्यापेर डिस्को–बार धाएको । गाँजा–चरेस खाएको । मदिरामा लठ्ठिएको । धुवाँमा धुवाँसरी नै उडेको । त्यतिले नपुगेर अनेकनथरी इन्जेक्सन पनि लाएको ऊ सगौरव सुनाउँछ । के मात्रै गरेन उसले ! जाने–देखेका सबै गरेकै थियो । अरु त अरु आफ्नै गर्लफ्रेन्ड पनि अरुसँग साटेको रे ! अर्काकी गर्लफ्रेन्ड या श्रीमती सट्टामा ल्याएको रे । जहाँ जेजे देख्छ र आइपर्छ त्यही व्यहोरेकै थियो उसले ।
मन मिल्दासम्म सँगै हाँस्यो, खेल्यो, बस्यो । मन नमिलेको दिन सजिलै छुट्टियो । कुटाकुट र मारामार गरेर पनि समाज र दुयियाँलाई देखाउनकै लागि दम्पत्तिको रुपमा बस्नु केवल नौटङ्की हो । विवाह वा सम्बन्ध कुनै हालतमा सम्झौताको खेल हुँदै होइन ।
अहिले उसलाई लाग्छ, ‘‘जसरी एउटा उमेर सधैं रहँदैन, तर ती कुरा सधैंका लागि हुँदा रहेछन् । ऊ वर्तमानमा उभिएर घरिघरि पुरानै समयमा फर्कन खोज्छ ।
यस्तो रङ्गिन दुनियाँमा रङ्गमङ्गिएको बेला रब ख्यालख्यालमै दुई सन्तानको बाबु बनेको थियो । एक बच्चा सहितकी न्यान्सीसँग उसको भेट । अरु दुई बच्चा जन्मिएपछिको जिम्मेवारी । न्यान्सीसँगको गहिरो प्रेम अनि अप्रत्यासित बिछोड । त्यतिबेलाको आफ्नो हालत । न्यान्सीको त्यो रुप । त्यसपछि आफ्नै सन्तानबाट समेत बेखबर बस्नु पर्दाको पीडा । अनि आजको आफ्नै हाल । यस्ता कुरा सम्झेर रब बेलाबेला निकै घोरिएर बसेको हुन्छ ।
डेलिभरीको कामबाट एकछिन फुर्सद मिले ऊ सहकर्मीसँग आफ्नो विगत कोट्याएर मन भुलाउने प्रयत्न गर्छ । उसलाई थाहा छ यो क्षणिक प्रयास हो । भरे फेरि एकान्तमा बेसमेन्टको बास त छँदैछ ।
आफ्नो अलिखित डायरीबाट ऊ प्रत्येक पाना पल्टाउन कुनै हिच्किचाहट मान्दैन । अनि न्यान्सीले एकदिन आफ्नै सामु बडेमानको काले अधवैंशेलाई अँगालेर धोका दिएको क्षण ऊ कहिल्यै भुल्दैन, तर बिर्सने प्रयास भने जारी छ ।
‘‘वास्तवमा म त्यो क्षण कहिल्यै सम्झन चाहन्नँ, तर बिर्सन खोज्नु झनै सम्झनु पो रहेछ,’’ ऊ कुराको सुरुवातमै यसरी गहिरिन थाल्छ ।
ऊ भन्छ ः बिहे नै नगरी पुस्तौं–पुस्ता चल्ने आधुनिक समाज हो उसको । उसका बाबुआमा र तिनका पनि बाबुआमा यस्तै थिए रे उसले जान्दा । उसका बाबुआमा जो श्रीमान् श्रीमतीचाहिँ थिएनन् ।
यस्तै देखेर, सिकेर हुर्किएको ऊ र उसको समाज । उसले पनि बिहे गरेन न्यान्सीसँग । सम्बन्ध केवल निजी समझदारीमा मात्रै चलेको थियो । प्राविधिक रुपमा उनीहरु अविवाहित थिए । अमेरिकी समाजमा यो अति सामान्य विषय हुँदै हो । बाबुआमाको औपचारिक बिहेबारी नभई सन्तान जन्मिने र हुर्कने क्रम चलिरहेकै छ । बिहेवारी नगरी लिभिङ टुगेदरमै पुस्तौंपुस्ता चल्नुलाई आमप्रचलन भने पनि हुन्छ ।
मन मिल्दासम्म सँगै हाँस्यो, खेल्यो, बस्यो । मन नमिलेको दिन सजिलै छुट्टियो । कुटाकुट र मारामार गरेर पनि समाज र दुयियाँलाई देखाउनकै लागि दम्पत्तिको रुपमा बस्नु केवल नौटङ्की हो । विवाह वा सम्बन्ध कुनै हालतमा सम्झौताको खेल हुँदै होइन । सम्झौता गर्नु परेको दिन त दुवैका लागि अन्तिम क्षण भइहाल्छ । भोलिपल्टै दुवैका लागि अर्काे बाटो खुला छँदैछ । हिसाबकिताब दुवैको बराबर । किनकि समाजै यसैगरी बनेको न छ ।
रबका बाबुआमा पनि यस्तै जोडी थिए । ऊ र उसको भाइ सानै छँदा बाबुआमा छुट्टिएर बसेको उसलाई थाहा थियो । उसकी आमाका तीन ब्वाइफ्रेन्ड थिए । आमाले फरक–फरक ब्वाइफ्रेन्डसँग जीवन गुजारिन् । रबले पनि आमासँगै तिनै सौतेला बाबुसँग बाल्यकाल र किशोरकाल बितायो । उसलाई कहिल्यै थाहा भएन कि उसको वास्तविक बाबु कुनचाहिँ थियो । आमाको ब्वाइफ्रेन्ड कोही स्थायी थिएनन् ।
जब आमाका ब्वाइफ्रेन्ड फेरिन्थे, उसका बाबु पनि फेरिन्थे । कहिले आमा एउटाको पाहुनाजस्ती हुन्थिन् । कहिले उनका ब्वाइफ्रेन्ड पाहुनाजस्ता हुन्थे । उसले देखे–जानेको उसको परिवार यस्तै थियो । जस्तो ऊ हुर्किएको समाज र यहाँको संस्कार थियो ।
एक बच्चाकी आमा भएर पनि न्यान्सी मस्त जवानीमा चढेकी युवती थिई । उसले पनि रबको गठिलो शरीर र हँसीमजाक गर्ने शैली खुब मन पराई । उपहार आदानप्रदान अनि ड्रिङ्क्स र डान्ससहितको त्यो सप्राइज पार्टीमा ऊ पूरै हिरो साबित भएको थियो । त्यही पहिलो रात रबले न्यान्सीलाई प्रपोज मात्र गरेन साथै लिएर डेरा फर्किएको थियो ।
क्रिसमसको रमझममा डिसेम्बरको फ्रिजिङ साँझ । एउटा सप्राइज जमघट हुँदै थियो । करिब २० युवायुवतीको हल्लाखल्लायुक्त भीडमा थियो रब पनि । उसले पहिले न्यान्सीलाई भेटेकै त्यहीँ हो । भर्भराउँदी न्यान्सीलाई देखेपछि त्यो कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा रबको दिलमा एक प्रकारको आगो सल्किएको थियो ।
न्यान्सीले अर्काे वर्षको क्रिसमसमा रबलाई बाबु बनाएर नयाँ सन्तान उपहार दिई । त्यसपछि अर्काे वर्ष अर्काे उपहार । न्यान्सी र तीन सन्तान भएपछि रबमाथि जिम्मेवारी थपिए । ऊ पहिले जस्तो आवारा नभई व्यावहारिक बन्न कामकाजी हुँदै गयो ।
‘‘साँच्चै रब, मैले तिमीसँग यति लामो समय सँगै बसुँला भन्ने सोचेकै थिइनँ,’’ वर्र्षाैंपछिको एक साँझ मदिरामा लठ्ठिएकी न्यान्सीले भनेकी थिई, ‘‘म त दुई–चार दिन वा हप्ताका लागि भनेर तिमीसँग आएकी थिएँ । त्यो पहिलो रातको भेटमै तिमीले मेरो मन पूरै जितेका थियौ । त्यसपछि पनि तिमीले मलाई यसरी भुलायौ, आज कसरी १५ वर्ष तिमीसँग बिताइरहेछु मैलाई पत्तो छैन ।’’
रबलाई न्यान्सी साँझमा यसरी नशामा लठ्ठिएको औधी मन पथ्र्याे । दिनभर काम गरेर साँझ फर्कंदा न्यान्सीलाई उसैगरी लठ्याउन ऊ थरी–थरीका मदिरा बोकेर घर छिथ्र्याे । न्यान्सी पनि सायद रबभन्दा पनि उसले ल्याउने सोमरसको व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्थी ।
रब र न्यान्सी बोस्टनदेखि करिब ३० माइल पश्चिमको कन्कर्ड सिटीको एक अपार्टमेन्टमा बस्थे । न्यान्सी दैनिक बच्चाहरुलाई स्कुल बससम्म लैजाने र ल्याउने गर्थी । अनि घरकै अरु कामधन्धामा व्यस्त हुन्थी ।
रबचाहिँ एउटा रुफिङ कम्पनीमा काम गर्न थालेको थियो । बोस्टन अमेरिकाकै पुरानो सहर हो । यहाँका पुराना घरका छानो जीर्ण भएपछि फेर्नुपथ्र्याे । ती घरमा छानो मर्मत गर्ने, फेर्ने, टाल्नेलगायतका काममा रब व्यस्त हुन थाल्यो ।
सुनसान जङ्गलको आसपास भए पनि पूर्णसुरक्षित बस्ती थियो कन्कर्ड सिटी । गाडी चलाएर झण्डै एक घण्टामा ऊ काम गर्न बोस्टन सहर पुग्थ्यो । सबै सुविधायुक्त सानो सहरबाट मानिसहरु काम गर्न दैनिक एक, डेढ घण्टा गाडी चलाएर ठूलो सहरतिर जान्थे । यसको उद्देश्य हुन्थ्यो– सहरको महँगी छलिने अनि फराकिलो ठाउँमा शान्त बस्तीको आनन्द लिन पाइने । विकासको यो मोडल अमेरिकाको मूल पहिचान हो । खासमा रब पनि सहरको महँगी छल्नकै लागि कन्कर्ड पुगेको थियो ।
दिनभर लामा–लामा झ¥याङ चढेर घरका छाना–छानामा काम गरेको थकाइ साँझ न्यान्सीसँग मदिराले मातेर मस्तराम बिसाउँथ्यो ऊ । बिहान चङ्गा मन लिएर उही काममा ऊ बोस्टन पुगिसक्थ्यो ।
दिनहुँ बोस्टन र कन्कर्ड आउ–जाउ गरेर उसका करिब १५ वर्ष बिते । यहीबीचमा बच्चाहरु पनि कन्कर्डमै हुर्किए । बच्चा हुर्काउने सवालमा न्यान्सीले रबलाई कुनै भार पर्न दिइन । कुनै व्यावहारिक तनाव र सानातिना असमझदारी न्यान्सीले सहेर रबलाई साथ दिने सक्दो प्रयास गरिरही ।
सम्बन्ध सम्झौतामा टिक्दैन भन्ने उनीहरुलाई राम्ररी थाहा थियो । सम्झौता गर्नुभन्दा तुरुन्त सम्बन्ध तोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता दुवै राख्थे । यद्यपि, दुवैले त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गरेका थिएनन् । जे पर्छ परेकै दिन टर्छ भन्नेचाहिँ सोचेकै हुँदो हो । नभन्दै एकदिन नसोचेकै घटना भइदियो ।
लगातार कामको चापले रब केही महिनायता हैरान हुन थालेको थियो । उसलाई बिहान कन्कर्डबाट बोस्टन र साँझ फेरि बोस्टनबाट कन्कर्ड आउजाउ गर्न कठिन हुँदै गयो । हिमपातको सिजनअघि नै धेरै घरका छानो फेर्नु र टाल्नुपर्ने कम्पनीको सम्झौता थियो । प्रतिकूल मौसम हुँदाहुँदै पनि दैनिक १६ घण्टासम्म काम गरेर पनि सम्झौताअनुसार काम छिटै सक्न कम्पनीले दबाब दिइरहेको थियो ।
उसले न्यान्सीसँग सल्लाह गरेरै दैनिक आउजाउको क्रम घटाउन थाल्यो । ऊ सातामा पाँच रात बोस्टनमै बस्ने र दुई रात कन्कर्ड फर्कने तालिकामा अभ्यस्त हुन थाल्यो । फेरि यो तालिका पनि संशोधन भयो । अब सातामा एक रात मात्र कन्कर्डको बास हुन थाल्यो उसको । हरेक शुक्रबार साँझ ८ बजेतिर मात्र ऊ न्यान्सीको हुन पुग्थ्यो । व्यस्त काम देखाउँदै ऊ विस्तारै दुई साताको एक शुक्रबार मात्र घर पुग्न थाल्यो । केही समय यसैगरी उसको तालिका तलमाथि हुँदै गयो ।
एकदिन ऊ बुधबार दिउँसै कन्कर्ड फर्कियो अचानक । त्यही अचानकले एकपछि अर्काे घटनाक्रम अघि बढाउँदै लग्यो अचानकै । अपार्टमेन्टको ढोका खुलेन । उसले घन्टी बजाउन पनि छोडेन । न्यान्सीको नाम लिएर कयौंपटक बोलाए पनि ढोका खुल्दै खुलेन ।
निकैबेरपछि एक पुरुष ढोका खोलेर ठिङ्ग देखा पर्यो । रब ट्वाँ पर्नुअघि नै उसले सोध्यो, ‘‘को हौ तिमी ? कसलाई खोजेको ?’’
आफ्नै घरको ढोकामा आफैंलाई को हौ भन्ने प्रश्न उसका लागि भयावह त छँदै थियो, त्यो भीमकाय शरीरको काले अधवैंशेलाई देखेपछि ऊ झन् भयभित भयो । रबले चर्काे स्वरले ‘न्यान्सी’ भन्दै भित्र पस्न खोज्यो ।
त्यो व्यक्तिले उसलाई एक हातले बाहिरै धकेलेर रोक्दै भन्यो, ‘‘पर्ख, तिमी को हौ म जान्दिनँ । यहाँ मेरी गर्लफ्रेन्ड र म बस्छौं । तिमी जसलाई न्यान्सी भनिरहेका छौ । ऊ मेरी गर्लफ्रेन्ड हो, तिम्री होइन ।’’
उसको कुरा रबलाई रन्थन्याउन काफी थियो । ऊ रिङ्गटाले फनफनी घुमेझैं हुन थाल्यो । उसको शरीरका अङ्गप्रत्यङग एकएक गर्दै चिसो हुँदै गए । हातगोडा काम्न थाले । कान बेस्सरी कराए । रबका आँखामा आफ्नो घर, आफ्नी गर्लफ्रेन्ड, आफ्ना सरसामान झल्झली नाच्न थाले ।
रबले जति जोडबल गरे पनि आफ्नै घरभित्र पस्न पाएन । रबको दिमागमा एकाएक वर्षाैं न्यान्सीसँग बिताएका पल सिनेमाका रिलझैं घुम्न थाले । फर्केर पूरै रिल हेर्दा पनि उसले कुनै दिन वा क्षण न्यान्सीप्रति शङ्का गर्ने ठाउँ देखेन ।
ह्विस्कीले मातेका गरमागरम् साँझहरुमा न्यान्सी प्रायः भन्ने गर्थी, ‘‘रब, आई हेट दोज गाइज्, हु आर ब्ल्याक । आई नेभर क्यान इमाजिन टु मिट देम एन्ड बि फ्रेन्ड विथ देम । हाऊ अदर्स गल्र्स आर डुइङ दिस ?’’
रबका दिमागमा न्यान्सीका यस्तै बचनहरु कुद्दै थिए । त्यतिकैमा न्यान्सी देखा परी ढोकामा । ऊ बिलकुल फरक अवतारमा थिई । उसको हेयरस्टाइल पूरै फेरिएको थियो । उसमा भद्दा मेकअपको लेप कत्ति पनि सुहाएको थिएन । हातमा चुरोट थियो । र, मुखबाट भर्खरै धुवाँको मुस्लो छुटिरहेको थियो । उसका आँखा पहिले जस्तो सरल र मायालु थिएन । पूरै निलो दहजस्तो डर लाग्दो देखिन्थ्यो । ओँठ पनि सुकुमार र चञ्चल थिएनन् । बैजनी रङ्ग पोतेको अजीव देखिन्थ्यो त्यो ।
मानौं ऊ पहिलेकी न्यान्सी हुँदै होइन वा यो उसको झुटो अवतार हो । यस्तो स्वरुपमा न्यान्सीलाई देखेपछि रब झन् रन्थनियो । उसको बोली र व्यवहार पहिलेको न्यान्सीको जस्तो पटक्कै थिएन । उसले रबप्रति कुनै माया देखाइन । कुनै दायित्वबोध पनि गरिन । कुनै सरोकार नै देखाइन ।
बोस्टनको व्यस्त कामकाजका बीच रब एक युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा बस्न थालेको रहेछ । न्यान्सीले त्यही अस्वेत व्यक्तिबाट ती फोटो पाएकी थिई । यति देखेपछि उसलाई रब बोस्टनमा व्यस्त हुनुको रहस्य बुझ्न गारो भएन । उसले रब कन्कर्डभन्दा बोस्टनमै बढी रमाउनुको कारण अथ्र्याउनु अस्वाभाविक पनि थिएन ।
रबले न्यान्सीसँग यस्तो सबै गर्नु र हुनुको कारण जान्न चाह्यो । उसले यस्तो धोका कल्पनै नगरेको भन्दै बिलौना गर्न थाल्यो ।
जबाफमा न्यान्सीले त्यो अधवैंशेको हात समाउँदै भनी, ‘‘हिजो म तिम्रो थिएँ होला, तर अब उसको भइसकेँ । तिमी हामीलाई डिस्टर्ब नगर । बरु यहाँबाट गइदिएर हामीलाई सहयोग गर ।’’
यति भनेर न्यान्सीले आफ्नो हातको फोन रबतिर बढाउँदै हेर्न सङ्केत गरी । फोन आफ्नो हातमा नलिँदै रबले स्क्रिनमै एउटा फोटो देख्यो । जुन आफ्नै थियो । त्यो फोटोमा रब आफू अर्की एक युवतीसँग अँगालिएर ओछ्यानमा पल्टिएको थियो । फोनमा फोटो एकपछि अर्काे गर्दै फेरिँदै गए । हरेक फोटोमा रब एक युवतीसँग अनेकन अवस्थामा देखिन्थ्यो । नितान्त गोप्य कोठाभित्रका ती तस्बिर अन्तरङ्ग सम्बन्ध खुलाउने यथेष्ट प्रमाण थियो । अनि न्यान्सीको मन र मुटु चुँडाउने प्रमुख कारण पनि थियो ।
रब भने न्यान्सीको मोबाइलमा ती फोटो देखेर घोर आश्चर्यमा परेको थियो । अघिसम्म न्यान्सीले आफूलाई धोका दिएको ठानेर ऊ बिलौना गरिरहेको थियो । अहिले आफैं न्यान्सीको अगाडि एक धोकेबाजका रुपमा उभिनु पर्दा ऊ के गरौं–कसो गरौंको अवस्थामा पुगेको थियो ।
त्यो मोबाइलमा करिब एकदर्जन फोटो हेरेपछि रब खङ्ग्रङ भयो । उसका ओठतालु सुक्दै गए ।
न्यान्सीले सोधी, ‘‘अब अरु केही भन्नु छ ?’’
रब बोल्न खोज्दै थियो । न्यान्सीले रोक्दै अगाडि भनी, ‘‘सम्झ, यो मायाको खेल यहीँ खत्तम भयो । आजबाट जस्तालाई त्यस्तै भो भन्ने ठान ।’’
रबले अझै न्यान्सीलाई सम्झाउने प्रयास नगरेको होइन । न्यान्सीले अस्वेत व्यक्तिको प्रेमप्रति आफू पूरै पागल भइसकेको जबाफ फर्काइरही । त्यस व्यक्तिको प्रेममा न्यान्सी पागल भएको रबले पत्याउनै सकेन वा चाहेन । रबका कुनै कुरा न्यान्सीले सुन्नै चाहिन । बस्, चुरोटको धुवाँ उडाउँदै हातको इसाराले जाऊ भन्ने सङ्केत मात्र गरिरही । उसले धेरै विवाद गर्नुभन्दा रबलाई चिन्दिन भनेर ठाडै पन्छाउन खोजी ।
अवस्थाले विवादको रुप लिन धेरै बेर लागेन । एकले अर्काेलाई धम्क्याउँदै प्रहरी बोलाउन फोन गरे । केही मिनेटमै साइरन बजाउँदै प्रहरीको गाडी देखा पर्यो ।
प्रहरीकै उपस्थितिमा रबले घरभित्र पस्न पायो एकैछिनका लागि । तर अफसोच, त्यहाँ उसको नामनिसाना भेटिने कुनै वस्तु वा सामान थिएनन् । न भित्तामा उसका फोटो, न कपडा, न जुत्ता, न ब्रस, न रेजर केही सामान छँदै थिएनन् ।
उसका निजी वस्तु पूरै अर्कैका वस्तुले प्रतिस्थापन गरेको देख्दा ऊ तीनछक परेको थियो । अस्तिसम्मका आफ्ना हरेक सामान एकाएक हराएर पूरै नयाँ वस्तुमात्र देख्दा उसलाई भाउन्न भयो । ऊ केही बोल्नै सकेन । आत्तिएको भावमा यता हे¥यो, उता हे¥यो । कहीँ केही आफ्ना सामान नदेखेपछि उसलाई अर्कैको घरमा झुक्किएर छिरेजस्तो भयो । त्यहाँबाट कुन बेला निस्कनु जस्तो भयो ।
प्रहरीले पनि रबको दाबीलाई पत्याउने केही आधार भेटेन । प्रहरीले रबलाई बाहिर ल्याएर सम्झाउँदै भन्यो, ‘‘तिमीले भनेका केही दाबी पनि यहाँ मिलेनन् । कृपया, उनीहरुको व्यक्तिगत जीवनमा डिस्टर्ब नगरिदेऊ । बरु आफ्नो बाटो लाग्नुमै तिम्रो भलाइ छ ।’’
यति भनेर प्रहरी त्यहाँबाट हिँड्यो । रबले केहीबेर प्रहरीको गाडी गएतिर हेरिरह्यो । अनि न्यान्सी पनि भित्र पसी । रबले न्यान्सीले टाउको फर्काएर गएको पनि केहीबेर हेरिरह्यो ।
त्यो अस्वेत व्यक्तिचाहिँ रब नजिकै गएर सहानुभूति देखाउँदै भन्यो, ‘‘सरी म्यान, यु क्यान फाइन्ड योर स्टफ्स इन दि बेसमेन्ट ।’’
२०७६ माघ १८ गते बाह्खरी डट कम मा प्रकाशित कथा
अधिकारी अमेरिकाको बोस्टनमा बस्छन् ।